घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकिंग यात्रा समाचार » COVID-19 डिप्रेशन? नेपाल यात्रा कसरी मद्दत गर्न सक्छ
ब्रेकिंग यात्रा समाचार • LGBTQ • नेपाल ब्रेकि News न्युज • समाचार • मान्छे • सुरक्षा • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • विभिन्न समाचार
अक्टोबर 11, 2020
नेपालको पर्यटन भनेको नेपालमा माउन्ट सगरमाथा आरोहण गर्नु भन्दा पनि धेरै कुरा गर्न सक्दछ।
संयुक्त राज्यमा तीन जना मध्ये एक जना चलिरहेको COVID-१ during संकटको बेला मानसिक समस्या भोग्दैछन्। आफैंमा फर्केर, आन्तरिक-शान्ति प्राप्त गर्दै, र आफैंमा सम्भावितताको अन्वेषण गर्नु भनेको पर्यटकको नयाँ ठाउँ यात्रुहरूको नयाँ युगको लागि अर्थ हुन सक्छ। भगवान बुद्धले यसको साथ मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, र नेपाल जन्मस्थान हो।
यद्यपि यसका लागि नेपालको सिमाना अहिले पर्यटनका लागि बन्द भएकाले पर्खनु पर्दछ। अपुष्ट रिपोर्टहरूले यो अक्टुबर १ after पछि परिवर्तन हुन सक्छ भन्छ
आज पंकज प्रधानसंग आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव साझा गर्दैछन जब उनले एक बुद्धवादी समुदायको भ्रमण गरे र आफैंलाई आफ्नो शान्तिको खोजीको लागि सामाजिक रुपमा टाढा राखेका थिए।
पंकज प्रधानसंग २ दशक भन्दा बढीको लागि पर्यटन उद्योगमा अनुभवको साथ आउँदछन्। उनले काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ मैनेजमेन्ट (KUSOM) बाट सीआरएम (मार्केटिंग) मा विशेषज्ञताको साथ एमबीए गरे।
उनी फोर सीजन ट्राभल एण्ड टूर्सका निर्देशक, पर्यटन टोस्टमास्टर्स क्लबका चार्टर अध्यक्ष, जिल्ला 6१ मा ए of का क्षेत्र निर्देशक, र काठमाडौंको एसीई व्यवस्थापन संस्थानमा सहयोगी संकाय सदस्य पनि छन्। उहाँ हिमालयन क्षेत्रमा समावेशी पर्यटन पहल को एक अग्रणी मानिन्छ। उनले जिम्मेवार पर्यटन सम्बन्धी धेरै कार्यशाला / सम्मेलनहरुमा बोलेका छन् र नेपाल, युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा अतिथि व्याख्यान दिएका छन्। '
पंकजले यस्तो अन्वेषण गरे जुन एक आगन्तुक पनि अन्वेषण गर्न असाध्यै भोकाउन सक्छ - र यसले धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्दैन। पंकजमा अधिक जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
स्वचालित रूपमा ट्रान्सक्रिप्ट उत्पन्न गरियो (त्रुटिहरू समावेश गरियो)
नमस्ते र Aloha। मेरो नाम जुर्जेन स्टेनमेट्ज हो। म तपाईंलाई होनोलुलु, हवाईमा लाइभस्ट्रेमेडबाट टाढा गर्दैछु। र मसँग मेरो राम्रो साथी छ। म धेरै, धेरै वर्षदेखि जान्दछु, यसको मतलब यो होइन कि हामी बुढो छौं, तर मलाई थाहा छ पंकज धेरै, धेरै बर्ष, म तपाईंको अन्तिम नाम उच्चारण गर्न सक्दिन। त्यसोभए तपाई हामीलाई आफ्नो थर बताउन लाग्नु भएको छ, तर उहाँ हामीलाई संसारमा मेरो मनपर्ने ठाउँहरू मध्ये एक जोड्दै हुनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई नेपालबाट जोड्दै हुनुहुन्छ। यो गन्तव्य हो कि प्रत्येकको जीवनमा कम्तिमा एक पटक मैले स्वीकार गर्नुपर्दछ कि मैले सगरमाथा कहिल्यै देखेका थिएनन किनकि त्यो बादल थियो। त्यसोभए म फर्केर आउन सक्दछु वास्तवमा हेर्नको लागि, तर मैले यो विमानबाट देखेँ।
त्यसो भए यो आश्चर्यजनक छ, तर नेपालमा सबै थोक संसारका अन्य ठाउँहरू भन्दा अलि अलि फरक छ। र पंकज, आ कम्पनी चलाउँछन्, चार सीजन यात्राको नामबाट एक इनबाउन्ड टूर अपरेटर। उनी धेरै अनुभवी छन्, अमेरिकी यात्रुहरूको साथ र धेरै, धेरै बर्षदेखि यो गरिरहनुभएको छ र, ओह, गोप्य थियो र विश्वमा सबै भइरहेको थियो। यस समयमा पनि नेपाल भ्रमणका लागि त्यहाँ धेरै कारणहरू छन्। र यो सबै पर्वतारोहण होइन र यसमा अरू धेरै तरिकाहरू छन्। उसले हामीलाई आफ्नो र अलि अलि बढी नेपालको अन्वेषण गर्ने नयाँ तरिका बताउनेछ।
Aloha महालो। र धन्यबाद। तपाईंले भन्नुभएजस्तै तपाई धेरै पटक नेपाल आउनुभयो, तर तपाईले माउन्ट सगरमाथा देख्न सक्नु भएन। र यसले मलाई न्यूयोर्कको १ 1923 २। को याद दिलाउँछ, रिपोर्टरले १ 1923 २। माउन्ट सगरमाथा आरोहणको तेस्रो प्रयासको लागि स्थापना गरिरहेको थियो। त्यसैले जब उनी सगरमाथा आरोहण गर्न चाहन्छन् भनेर सोधियो, तब उनको जवाफ एकदम सरल थियो। तीन शब्दहरूमा, उनले भने, किनभने यो त्यहाँ छ। मल्लरीले भनेन कि म सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही हुँ वा शिखरमा पहिलो व्यक्ति बन्न म आफ्नो अहम्लाई पूरा गर्न चाहान्छु। उनले केवल भने, म सगरमाथा चढ्न चाहन्छु किनकि त्यहाँ छ। त्यसैले त्यो वाक्य धेरै व्यक्ति, अन्वेषकहरू, खोजी गर्नेहरू, जोखिम लिने उद्यमीहरूका लागि मार्गनिर्देशन मन्त्र भएको छ। त्यसोभए किन नेपाल वा त्यो कुराको लागि हिमालय मामिलाहरू साधारण छुट्टीको यात्राको लागि मात्र होईन। हो। तपाईंले भन्नुभएजस्तै, यो हो, र यो धेरैको लागि भित्री यात्राको सम्भावित सुरूवात हुनसक्दछ, दुर्भाग्यवस, १ 1923 २ in मा यो पर्वतारोही तेस्रो प्रयासमा बनाउन सक्दैन।
उनले आफ्नो जीवन गुमाए, तर उनी १ 1999 19 in मा उनको मृत शरीर फेला नपरेसम्म एक नायक बने। बाँकी इतिहास हो। यदि तपाईंले यात्राको इतिहासलाई हेर्नुभयो भने, सायद प्रारम्भिक उमेरमा, फुर्सतको यात्रा वा यात्रा भनेको यात्राको लागि मात्र तीर्थयात्रीहरूको लागि हो, हो कि? चाहे व्यक्ति मक्का यात्रा गरे वा जसले आजको पहाडी गन्तव्य भगवान सेबा वा माउन्ट केलोगको यात्रा गर्थे, तिब्बतका मानिसहरूले जीवनको ठूलो अर्थ पत्ता लगाउन यात्रा गरे। र पिलग्रिम रिलीज गर्न वा ट्रिप्स भएको रूपमा। त्यसैले भाग्य साइटहरू धेरै सजिलो भएको छ। हो, COVID-2,500 को समय मा वर्तमान पोष्ट चुनौतीपूर्ण छ। तर यदि तपाई फर्कनुभयो भने, यो धेरै सजिलो भएको छ। व्यक्ति यात्रा गर्न सक्छन् र, उह, धार्मिक क्रेडिट पूरा गर्न वा कमाउन सक्छन्। तर त्यस भन्दा पछाडि, जब हामी एक खोजीकर्ताको रूपमा यात्रा गर्थ्यौं वा आफैंलाई खोज्न सुकरातले लगभग २,XNUMX०० बर्ष अघि के भन्यो, कुनै र d्ग आफैमा थिएन।
मैले हिमालयमा आउने मानिसहरूका लागि यात्राहरूको यात्राको क्रममा धेरै मानिसहरूलाई भेटें, तिनीहरू उत्तर अमेरिका वा दक्षिण अमेरिका वा यूरोप जस्ता टाढाबाट आउँदछन् होला जस्तो लाग्थ्यो, तिनीहरू यहाँ केको लागि आउँछन्? उनीहरूसँग राम्रा सडकहरू, ठूला घरहरू, राम्ररी व्यवस्थित गरिएको, तपाईंलाई थाहा छ, निर्माण स्थानहरू छन्। तर नेपाल वा हिमालयमा के हेर्छ? तर पछि मैले बुझें कि उनीहरूसँग यात्रा गर्दा म उनीहरूका यात्राहरू व्यवस्थित गर्दछु। यो मात्र नग्न आँखाले देख्न सक्ने कुरा मात्र होइन। तिनीहरू यहाँ चीजहरू हेर्न आउँदछन् जुन आँखाले नदेखाईन्छ वा ऊर्जा महसुस गर्दछ जुन हातले स्पर्श नगरेको हो। र तपाईं जाँदै हुनुहुन्छ, जस्तै, म तपाईंलाई भन्न सक्छु, हो,
मानिसहरु यहाँ के पत्ता लगाउन आएका छन् उनीहरुलाई थाहा थिएन कि यो अस्तित्वमा छ कि छैन। तर तिनीहरू आउँदा उनीहरूले महसुस गरे कि त्यहाँ दिव्य केही छ, बिहानको क्षण वा हिमालमा मात्र होइन, काठमाडौंका सडकहरूमा पनि। यो मलाई COVID लक हुनुभन्दा ठीक अघि भेट भएको एक महिला सम्झना दिलाउँछ। उनी plus० प्लस 70 75, 76 XNUMX पछि अस्ट्रिया डाक्टर, एक मेडिकल डाक्टरबाट। र उहाँ एक गार्ड मोन्डो को लागी दुई हप्ता को लागी एक यात्रा मा आए, एक होटल मा जाँच गर्नुभयो। र त्यसपछि उहाँ केवल दुई दिन मात्र होटल बाहिर आउनुभयो भिजिटर पैटर्न इकाइहरू, लेनदारहरूको साइट, र काठमाडौंको नजिकको पहाडमा जानको लागि। र म धेरै उत्सुक थिएँ, जस्तो कि उनीले काठमाण्डुमा के ल्याउँछिन् र केवल टुर टुर वा दुई साइट चीजहरू गरेदेखि। त्यसैले म उनलाई भेट्न गए जब उहाँ पार्टनमा थिए र मैले उनलाई एक कप कफीमा निम्तो दिएँ।
र मैले अत्यन्त शिष्टताका साथ सोधें, जस्तो होइन तपाईलाई काठमाडौंमा के लाग्छ र तपाई किन यति यात्रै यात्रा गर्नुहुन्न? र उनले भनिन्, वान्कर्स। म धेरै चोटि यहाँ आयो, पहिलो पटक नब्बेको दशकको शुरुमा। र म फर्केर आउँदैछु र हुनसक्छ यो मेरो अन्तिम यात्रा हो। केवल नेपाल मात्र होइन, तर युरोप बाहिर म सहज गर्दैछु। र म सायद त्यस समयमा लामो यात्राको लागि उडान लिन सक्षम हुनेछैन, यो वास्तवमै अझै कुनै खतरा थिएन। र उनले भनिन्, किन म मेरो अन्तर्राष्ट्रिय यात्राहरू वा यात्रा सम्पन्न गर्न चाहान्छु कारण धेरै सरल छ। जब म पहिलो पटक यहाँ आई र मैले धेरै पटक नेपाल यात्रा गरें, मैले यहाँ एउटा पहाड वा काठमाडौंको सडकमा एउटा अचम्मको तथ्य भेट्टायौं जुन मानिसहरू खुशी हुन पर्खिरहेका छैनन्। र मैले सोधेँ, त्यसोभए तिमी के भन्न खोज्दै छौ खुशी नहुनु? र तिनीहरूले भने, मैले मानिसहरूलाई पश्चिमी संसारमा वा विकसित, विकसित सभ्यता वा देशहरूमा, खुशीको पर्खाइमा हेर्दै गरेको देखेको छु, तिनीहरू विश्वास गर्दछन् कि सुख कतै टाढाको भविष्यमा हुन्छ, अहिले होइन, सुरक्षित गरिएको छ त्यहाँ जीवनभर को छुट्टी को लागी प्रतीक्षा गर्नुहोस्, वा तिनीहरू कारहरु खुशी हुनु को लागी प्रतीक्षा गर्न को लागी। तर के मैले काठमाडौंमा याद गरे, तिनीहरू जे भए पनि, उनीहरूसँग खुशी छन्। र मैले खुशीको लागि पर्खिरहेका व्यक्तिहरूलाई देखेको छैन। र त्यसपछि मैले महसुस गरें यो एकदम गहिरो कुरा थियो।
र उनले भनिन्, "मलाई यहाँ ल्याएको कुरा यही हो। र हो, हिमालय वा सगरमाथाले ध्यानाकर्षण गर्‍यो किनभने यो नेपालमा आउँछ, तर हिमालहरू। योसँग पूर्ण तत्व छ। यसले नेपाल वा हिमालयन क्षेत्रमा मानिसहरूलाई तान्छ। तर एक पटक तिनीहरू यहाँ आए पछि उनीहरूले महसुस गरे कि यो पहाडहरू भन्दा बढि छ। र त्यसोभए तिनीहरू फर्केर आएका कारण मानिसहरू। यति धेरै घटनाहरूमा मैले यो महसुस गरें कि यात्रीहरू जो नेपालमा माउन्ट एभरेष्टको आधार शिविरबाट उत्कृष्ट तस्विर लिन आउँदछन् वा ट्र्याकि journey यात्रामा जान आउँदछन्। तर यात्राको अन्त्यमा, तिनीहरू मध्ये अधिकांश, उनीहरूले चित्रहरू भन्दा बढी लिन्छन्। तिनीहरूले त्यो अनुभव भन्दा बढी लिन्छन्। प्राय: जसो उनीहरू चिया घरहरूमा आधारभूत घाटामा बस्छन् र आधुनिक आरामबाट टाढा रहन्छन्, वा जब तिनीहरू चिया वा खाजामा जान्छन् भने डाबरलाई खाइन्छन्, जुन स्थानीय चामल र दाल हो। चिया घर मालिकहरु। र तिनीहरूले ती चार धेरै पौष्टिक पोष्ट गरिएको धेरै न्यानो र धेरै भावनाको साथ बुक गरे। त्यसैले कहिलेकाँही यसले उनीहरूलाई साकार रूप दिन्छ। र त्यसपछि त्यहाँ धेरै कथाहरू भएको छ। उह, थोमा, यदि म तपाईंलाई हालसालै बताउन सक्दछु, त्यहाँ धेरै छन्, यो माइक्रोसफ्टका एक शीर्ष कार्यकारी थिए र उनी अस्ट्रेलियामा प्रशान्त प्रशान्त एशियामा बजार निर्देशकको रूपमा काम गरिरहेका थिए, र अन्ततः उनको जागिरबाट छुट पाए। छ वर्ष को लागी उकासे काम पछि। र के अनुमान? उसले भर्खर बैकपैकर हुन छनौट गर्यो। उसले भर्खरै आफ्नो झोला लिए र
अरमान्डोमा लाग्यो। उडान उडानमा काठमाडौं आइपुग्यो। अर्को दिन ऊ एक विपक्षीको खुट्टामा थियो। र त्यहाँ, उहाँ बीसी चिया हाउसमा स्थानीय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा पर्नुभयो, जब उनी सेट अप गर्दै थिए वा गोल र विपक्षी ट्र्याकतिर जाँदै थियो जुन तीन हप्तासम्म चल्थ्यो। र जब उनी स्थानीय चिया घरका मालिकसँग कुरा गर्दै थिए, र उनले त्यस्तो प्रकारको रिले कहिल्यै देखेका थिएनन्, यो हामीबाट थियो। र उहाँ उत्सुक हुनुहुन्थ्यो, स्थानीय स्कूल कस्तो देखिन्छ? र भाग्यवस त्यो एक मानिस भेटियो। उहाँ त्यस क्षेत्रका विद्यालयहरूको लागि स्रोत व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँ निरीक्षण यात्रा मा थिए। त्यसोभए जिज्ञासाको बाहिर, आर्क्स कि सज्जन। त्यसो भए तपाईले आपत्ति गर्नुहुनेछ यदि म तपाईंसँग सामेल भएँ किनकि म हेर्न उत्सुक छु, पहाड क्षेत्रमा स्कूलहरू हेर्नुहोस्। र उनले भने, यो ठीक छ। यदि तपाईं मसँग बिहान छ बजेमा सम्मिलित हुनुभयो भने, यो सही मार्गमा हो।
त्यसोभए तपाईं मसँग सामेल हुन सक्नुहुन्छ। त्यसोभए यो भलादमी बिहान सबेरै छ कि कारणको त्यो नेपाली आधिकारिक शैक्षिक अधिकारी अनुसरण गर्न। र हाम्रो समयको बारेमा हिँडेर, तिनीहरू स्कूलमा थिए र उनको अविश्वासमा, यो त्यस्तो स्कूल थिएन जुन उसले पश्चिमी विश्वमा सोचेको थियो। पुरानो प्याक फ्लोर बच्चाहरु जस्तै स्यान्ड्रा र क्यानमा, ठीक छ? छतमा नालीदार बीज। तर जब उनीहरू त्यस विद्यालयमा प्रवेश गरे, बच्चाहरू उत्साहित भए। उनीहरूले पूर्ण अंग्रेजीमा अभिवादन गरे। शुभ - प्रभात। त्यसो भए तिनीहरू फाईलमा अ English्ग्रेजी पढाइन्छ। ठिकै प्राथमिक स्कूल बाट। त्यसैले उनी एकदम प्रभावित भए र प्रधानाध्यापकले उनलाई एउटा भ्रमण दिए। त्यसोभए उनले केही कक्षा देखे, धेरै फरक छैन। कक्षा चलिरहेको थियो, बच्चाहरू उत्साहित थिए। र अन्त्यमा, जब उनलाई चियाको एक कप चियाको लागि ल्याइएको थियो जहाँ तपाईं जहाँसुकै पोलीएटमिक्समा जानुहुन्छ जहाँ तपाईं शहरमा वा माउण्टमा जानुहुन्छ।
त्यसोभए उनलाई एक कप चिया र अफ, ओह प्रदान गरियो र उनले वरिपरि हेरे र उनी एकदम उत्सुक थिए किनकि उसले त्यो क्षणसम्म कुनै पुस्तक, एकल पुस्तक देखिन। र त्यसपछि उसले प्रधानाध्यापकलाई सोध्यो। त्यसोभए तपाईंसँग पुस्तकालय छ वा तपाईं वरपर पुस्तकहरू छन्? अँ साञ्ची। हो, हामीसँग छ। र उसले कराए र एक शिक्षक तीन मिनेट पछि आए। हामीले एउटा ट्र tr्क ल्यायौं, धातुको बक्सलाई ठूलो ब्याकलगसँगै खोलियो। यसले केहि पुस्तकहरू लिए, केही क्र्याकरले छोडेको एक्लो ग्रह गाइडबुक, एक साथीको प्रेम कथामा चुम्बन सहित, कभरमा, जुन बच्चाहरूका लागि वास्तवमै उपयुक्त थिएन।
मैले त्यो क्रस उपन्यास पाएँ। र त्यसपछि उनले एउटा नक्शा बाहिर निकाले, एउटा विश्व नक्शा जहाँ यूएसएसआर देश थियो र पूर्वी जर्मनी अवस्थित थियो, जुन केहि पहिले नै अप्रचलित थियो। सहि। तिनीहरूले यसलाई यति सावधानीपूर्वक राखेका थिए, सुरक्षित रूपमा उसको मुटु डुबायो। उसले विश्वास गर्न सकेन। र यसले उसलाई धेरै चीजहरू दियो। र उसले प्रधानाध्यापकलाई भन्यो, "यदि तपाईलाई केही पुस्तक पठाउँछु भने के तपाईलाई कुनै आपत्ति छ? र प्रधानाध्यापकले भने, "हो, हामी मन पराउछौं, किनभने हामी यी बिद्यार्थीहरु बीच पढ्ने बानीको बानी बसाल्न चाहान्छौं। त्यसैले उनी आफ्नो ट्रेकको लागि अर्को दुई हप्ताको लागि प्रस्थान गरे। उनले आफ्नो यात्राको समापन गरे, फेरि गोडम्यानमा पनि पुगे। र उसले आफ्ना साथीहरूलाई ईमेल खोज्यो। यदि तपाईंसँग पुस्तकहरू छन्, जुन स्कुलका बच्चाहरूको लागि राम्रो छ, कृपया यसलाई अमेरिकामा मेरो घर पठाउनुहोस्। अष्ट्रेलियामा अमेरिकामा काम गर्न उहाँ फर्कनुभयो। र एक वा दुई महिना पछि, उहाँ आफ्ना बुवाबाट ईमेल पाउनुभयो कि सबै पुस्तकहरू पाँच, १०, र पुस्तकहरू भरिएको कोठा आउन थाल्यो।
त्यसोभए चुनौती भनेको त्यो पुस्तक नेपालमा कसरी ल्याउने। त्यो गाउँ [सुन्न नसक्ने] ​​मा छ, तर उसले आफ्नो सम्पर्कहरू प्रयोग गर्‍यो र उसले ती पुस्तकहरू आफ्नो गाईडमा ल्याउने काममा सफल भयो। उनले स्कूललाई ​​सूचित गरे कि हामीले पुस्तकहरू ल्याउने वाचा गरेका आकर्षक फिर्ता आउँदैछ। र उनी केवल गए र पुस्तकहरू हस्तान्तरण गर्न चाहन्थे। तर उनी छक्क परे, जब उनी गाउँको एकदमै नजिक पुगे, उनले देखे कि त्यहाँ एउटा ठूलो उत्सव चलिरहेको छ। त्यहाँ केराका रूखहरू, उसको लागि माला, संगीत, स्थानीय संगीतबाट बनेका गेटहरू थिए। त्यसकारण सम्पूर्ण गाउँले उनलाई बाउन्ड डाटा भनिने गाउँमा स्वागत गर्न पर्खिरहेको थियो। माइक्रोसफ्टका लागि शीर्ष कार्यकारीको रूपमा, उनले सबैभन्दा विलासी होटलहरू, चार सिजनहरूमा चेक इन गरेका थिए, वा तपाईले यसलाई रेड कार्पेटको नाम दिनुहुन्छ, स्वागत छ, तर जीवनमा कहिले पनि होइन। उसले त्यो न्यानो, साँचो आतिथ्य, साँचो कृतज्ञता महसुस गरेको थियो, र उनले पुस्तकहरूमा क्यानाडा वितरण गर्ने क्रममा, र उनी गार्थ बन्डलतिर लागे, तपाईं आफैले पहिले नै कुरा गरिरहनुभएको थियो, उहाँ आफैंलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईले आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्न कुनै पनि मालिक हाकिम, किनकि उनी पहिले नै यस ग्रहका सब भन्दा धनी मानिस हुन् कि तपाईको जीवनको उद्देश्य सायद यी बच्चाहरूको जीवन परिवर्तन गर्नुपर्दछ जो पढ्न र पुस्तकहरूमा आधारभूत पहुँचबाट वञ्चित छन्।
त्यसोभए उनले आफ्नो जीवनको फोन गरे। र जब उनी आफ्नो काममा फर्किए, उनले पहिले नै निर्णय गरिसकेका थिए कि म के गरिरहेछु। बरु म बच्चाहरूको जीवन बदल्न चाहन्छु। दुई वर्षमा, उनले माइक्रोसफ्टबाट काम छोडे। जीईले पढ्नको लागि कोठा भनिने गैरसरकारी संस्था सुरू गर्‍यो, अंग्रेजी र स्थानीय भाषाहरू, पुस्तकालयहरू, र पछि स्कूलहरूमा बच्चाहरूको लागि पुस्तकहरू प्रकाशन गर्न सुरू गर्‍यो। र अब पढ्नको लागि यो कोठा एक वैश्विक एनजीओ वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी बनेको छ जसको सुरूवात नेपालमा भयो। अब यसले अफ्रिका, एशियामा, दक्षिण अमेरिकामा र यसले जीवन परिवर्तन गर्दैछ संसारभरि काम गर्दछ। त्यसैले पोइन्ट नेपालको लागि धेरै साधारण ब्याकप्याकिंग यात्रा हो। ट्र्याकरको जीवन मार्ग मात्र परिवर्तन भयो। उसको नाम जोन वुड थियो, ओ ओ डी। र उनी पढ्न कोठाको संस्थापक हुन्। अब, उहाँ अचम्मको काम गर्दै हुनुहुन्छ, शिक्षाको माध्यमबाट भलाइको छेउमा। र त्यो धेरै उदाहरण मध्ये एक हो। यो एक मात्र उदाहरण होईन, एक यात्रा जुन केवल उसको जीवनको शैली परिवर्तन गर्दैन, तर यसले विश्वका धेरै, धेरै बच्चाहरूको जीवन परिवर्तन गर्‍यो। त्यो एक रमाईलो कथा छ
फिर्ता आउनुहोस्, तर तपाईं अन्त्य गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंले उनको समाचार वा तपाईंको यात्रा समाचार साम्राज्य बताउनुभयो। मलाई थाहा छ,
ठिक छ, यो साम्राज्य होइन, तर मलाई लाग्छ यो पोलबाट गर्न सकिन्छ। किन छैन? मेरो मतलब, तपाईहरूसँग इन्टरनेट छ, हैन? यो एक ग्लोबल चीज हो, तर यो एक आकर्षक कहानी पंक हो। र यसले यो निश्चित गर्दछ कि एकपटक थप पर्यटन भनेको शान्तिको व्यवसाय हो र मानिसहरू व्यापार। यो सबै सेतो स्यान्डी समुद्री किनारहरू र सुन्दर शहरहरू र फेन्सी खाना र लक्जरी होटेलहरूको बारेमा होईन। यहाँ पर्यटन को लागी धेरै छ। र मलाई लाग्छ कि नेपाल यी गन्तव्यहरू मध्ये एक हो जहाँ तपाईं यसलाई अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ। र, उम, म तपाईका धेरै कथाहरू पाउन चाहन्छु। मलाई पक्का विश्वास छ कि यो केवल कथा मात्र होइन तपाईले नेपालको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ। र, उम, मलाई लाग्छ कि यस पटक हाम्रो पोडकास्टमा हुनुको कारण हो। र, उम, म हाम्रा पाठकहरूलाई प्रोत्साहित गर्छु। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू, टिप्पणीहरू छन् वा तपाईं पंकजसँग सम्पर्कमा बस्न चाहनुहुन्छ भने, बस लाइभ स्ट्रिम डटमा जानुहोस्, यात्रा गर्नुहोस् र सम्झौतामा क्लिक गर्नुहोस्, र हामी तपाईंको प्रश्न वा तपाईंको जानकारी फर्वार्ड गर्न खुशी छौं। र यदि तपाई वास्तवमै बिभिन्न किसिमको यात्रामा जान चाहानुहुन्छ, केवल अन्वेषण गर्न मात्र होइन, तर तपाई नेपालमा हुँदा तपाईलाई खोजी गर्न, प्यानकेक भनेको व्यक्ति वास्तवमै सम्पर्क गर्नु हो। मलाई लाग्छ, धेरै मजा प्रकारको धन्यवाद। म रहनु पर्छ। र आशा छ कि हामी तपाईंलाई फेरि, ओह, चाँडै नै, र कृपया भन्नुहोस्, सम्पर्कमा रहनुहोस् र, उह, तपाईंको दिनको मजा लिनुहोस्। र त्यसपछि पल, र केहि शानदार खाना। म खानालाई साँच्चिकै मिस गर्दछु। यो केटाको बारेमा अर्को ठूलो कुरा हो।
धन्यबाद, थोमा। यो वास्तवमै राम्रो छ। र, ओह, म पक्का छु कि हामी अन्वेषणको भित्री आवाजमा धेरै मानिसहरूलाई मद्दत गर्न सक्छौं। हिमालयबाट धन्यबाद। काठमाडौंबाट धन्यबाद। ल। ख्याल राख्नुहोस् अलविदा अलविदा धन्यवाद। Bye
गत दशकमा ध्यानले धेरै लोकप्रियता लिएको छ। काठमाडौं र वरपर धेरै ध्यान केन्द्रहरू छन्।
नेपाल विपश्यना केन्द्रले ध्यानमा १०-दिने पाठ्यक्रमहरू चलाउँछ। पाठ्यक्रम भर मा यहाँ एक कडा नियम अनुसरण गरीन्छ। दैनिक ध्यान बिहान :4: .० मा सुरु हुन्छ, र मौन पूरा दश दिनको लागि राखिन्छ। दर्ता गर्न वा पाठ्यक्रममा पर्चा टिप्न केन्द्रीय काठमाडौं कार्यालय (सूर्य-शुक्र १० बिहान 30: )०) कान्तिपथको ज्योति भवनको प्रांगणमा जानुहोस्। सबै पाठ्यक्रमहरू दान द्वारा अनुदान प्राप्त हुन्छन्।
विपश्यना सब भन्दा पुरानो ध्यान गर्ने एक तरीका हो। लामो समय मानवतामा हरायो, यो बुद्ध द्वारा २,2,500०० वर्ष भन्दा पहिले खोजिएको थियो। विपश्यनाको अर्थ भनेको चीजहरू वास्तवमै उस्तै देख्नु हो। यो आत्म अवलोकनबाट आत्म शुद्धिकरणको प्रक्रिया हो। एक ध्यान गर्न को एक साधन को रूप मा प्राकृतिक सास अवलोकन द्वारा सुरू हुन्छ। यो तीक्ष्ण जागरूकताको साथ, व्यक्तिले शरीर र दिमागको परिवर्तित प्रकृति अवलोकन गर्न र अस्थायीपनको दुबै सार्वभौम सत्यको अनुभव गर्न, पीडित हुने र अह ego्कारको अवस्था प्राप्त गर्न अघि बढ्छ।
सम्पूर्ण मार्ग (धम्म) सार्वभौमिक समस्याहरूको लागि एक सार्वभौमिक उपचार हो र यसले कुनै संगठित धर्म वा सांप्रदायिकतासँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन। यस कारणले यो जाति, जाति वा धर्मको द्वन्द्व बिना सबैले स्वतन्त्र अभ्यास गर्न सक्दछ; कुनै पनि ठाउँमा, र कुनै पनि समयमा र सबैको लागि समान रूपमा लाभदायक साबित हुनेछ।
विपश्यना भनेको 'जीउने कला' हो जसले व्यक्तिलाई दिमागका सबै नकारात्मकताहरू जस्तै क्रोध, लोभ र अज्ञानताबाट मुक्त गर्दछ। यो त्यस्तो अभ्यास हो जुन व्यक्ति र समाजको भलाइका लागि सकारात्मक, रचनात्मक उर्जा विकास गर्दछ। विपपासना केन्द्र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वार नजिकै बुढानीलकण्ठामा अवस्थित छ।
COVID-19 को कारणले नेपाल प्रविष्टि नियमहरू
COVID-१ during को अवधिमा आगमन आवश्यकताको सन्दर्भमा आधिकारिक नेपाल पर्यटन बोर्ड वेबसाइट सहित नेपाल सरकारको वेबसाइटहरूमा कुनै अद्यावधिक जानकारी छैन।
नेपालमा अमेरिकी दूतावासले निम्न जानकारी राख्छ:
सरकारले सेप्टेम्बर १ announced लाई घोषणा गर्‍यो कि नेपालमा प्रवेश गर्ने सबै जग्गा बन्दरगाह अक्टुबर १ 14 को मध्यरातसम्म बन्द रहन्छ। त्यहाँ सीमित संख्याका सीमानाहरू छन् जसबाट फर्केका नेपाली नागरिकहरूलाई प्रवेशका लागि अनुमति दिइन्छ।
यस समयमा कुनै पनि विदेशीलाई नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति छैन। नेपाल सरकारले कूटनीतिक, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र केही अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संगठन कर्मचारीहरूको लागि अपवाद स्वीकृत गरेको छ।
रोग नियन्त्रण केन्द्रले COVID-१ 19 को लागी नेपालमा हुने जोखिम बारे मानिसहरूलाई सम्झाउँदछ।